TARTAN & TACLIIN: Dugsiga Sare ee Sh. Cabdullaahi Ibraahim, Ufeyn oo kaalinta 3aad ku guulaystay (dhegayso) – Radio Daljir
TARTAN & TACLIIN: Dugsiga Sare ee Sh. Cabdullaahi Ibraahim, Ufeyn oo kaalinta 3aad ku guulaystay (dhegayso)
Juunyo 12, 2018 2:09 b 0
Barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo ay maalgaliso shirkada Somtel waxaa xalay kaalinta saddexaad ku tartamay dugsiyada sare ee Shiikh Daahir Xasan Cagaaran iyo Shiikh Cabdullahi Ibraahim Ufeyn, waxaana ay halkaas guushu ku raacday Sh. Cabdullaahi Ibraahim Ufeyn.
Horyaalka TARTAN & TACLIIN waxaa isugu soo haray labada dugsi sare ee Eyl Sare iyo Maxamed Cawaale Liibaan Bossaso. Jadwalka horyaalka iyo meeshan lagu qaban doono ayaa guddigu sheegay in la shaacin doono bacdal Ciid.
Hoos ka dhegayso kaalinta saddexaad ee Tartan & Tacliin.